» DAAWO VIDEO: Suuq ay mataano ahaayeen Westgate Mall oo weerar lagu qaaday “LIVE”
DAAWO VIDEO: Suuq ay mataano ahaayeen Westgate Mall oo weerar lagu qaaday “LIVE”
Nov 14, 2013 - jawaab	Views :336ShareWararka naga soo gaaraya magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika, ayaa sheegaya in weerarr lagu qaaday Suuqa laga dukaameysto East Mall oo ku yaalla bariga Johannesburg.
Inta la ogyahay lix qof ayaa ku dintay weerarrkaas kuwaasoo ahaa dadkii ka dukaameesanayay Suuqa sida ay lee yihiin booliska Koonfur Afrika.
Cabdiraxmaan Yuusuf Raabi oo ah guddoomiye Jaaliyadda Soomaalida Koonfur Afrika oo la hadlay VOA-da ayaa sheegay in Suuqa la weerarray ay islee yihiin suuqa Westgate Mall oo bishii September ay weerarrtay kooxda Al-Shabaab ee dalka Soomaaliya.
Wuxuu sheegay in labadan suuq ay uu lee yahay nin asal ka soo jeeda Israel, balse wuxuu yiri weerarrkii lagu qaaday xarunta suuqa East Mall waa ka yer yahay kii Westgate Mall.
Ma jirto ilaa hadda cid loo qabtay weerarrka lagu qaaday Suuqan, marka laga reebo nin la sheegay in uu ka soo jeeda Laatin Amrica oo uu dukaankiisa uu ka dhacay qaraxa.
Ninkan ayaa booliska waxa ay lee yihiin waxaa uu la shaqeeyaa kooxaha calooshooda u shaqeesta ee Maafiyada kuwaasoo dhaca Baananka iyo dukaamada waaweyn.
Booliska ayaa wada baaritaan dheeri oo lagu ogaanayo qaraxa ka dhacay dukaanka East Mall ee dalka Koonfur Afrika.
Arrintan ayaa saameen weyn ku yeelatay Soomaalida ku dhaqan Johannesburg, waxaana wiil lagu dilay halkaas uu ku xayiran yahay Isbitaal ku yaalla magaalada oo la dhigay dadkii ku dhaawacmay weerarka sidaas waxaa yiri Cabdiraxmaan Raabbi.